Ungayithola Kanjani iRobux yamahhala (2020) kuRoblox? - Ukudlala
Uma kukhulunywa ngokudlala imidlalo eku-inthanethi, iRoblox iyipulatifomu lapho uzothola khona bobabili abadlali bamageyimu nabathuthukisi. I-Roblox iyinkundla yokugembula eyaziwayo online enemidlalo ethandwa kakhulu eyisingathwa kuyo. AmaGamers anamathele kuwo, futhi ngenkathi edlala noma yiluphi uhlobo lomdlalo, adinga into eyodwa kuphela, futhi lokho nguRobux. URobux uyimali engaphakathi kwegeyimu esetshenziswa ngabadlali bamageyimu ukuthenga izinto ezahlukahlukene ezifana nezingubo, izikhali, ama-avatar, njll. Uma unenani elifanele leRobux, ungumuntu ocebile kule nkundla yokudlala, futhi ungadlala umdlalo ngaphandle kwemingcele. Manje umbuzo oyinhloko oza kuwo wonke ama-gamer ukuthi ungayithola kanjani iRobux yamahhala.
Njenganoma iyiphi enye, imali engaphakathi kwegeyimu, kuzofanele ukhokhe imali yangempela ukuthola iRobux nayo. Ukuthengisa ukudlula kwegeyimu, amakhodi ephromo bekuyindlela yokuthola iRobux yamahhala, kepha lokho akusasebenzi kahle. Kulesi sihloko, sibhale ezinye zezindlela ezinhle kakhulu zokuthola amathani weRobux. Uma ulungile ekwakheni imidlalo noma ukuyimaketha, kuzokusiza ukuthi wenze inani elihle leRobux.
Izindlela ezihamba phambili zokuthola iRobux yamahhala:
Abantu bahlala bakholelwa ukuthi ukuthola iRobux mahhala kunzima impela, futhi akunakwenzeka. Kodwa lokho akulona iqiniso ngokuphelele, yize sivuma ukuthi kudinga inhlanganisela yokusebenza kanzima nokusebenza okuhlakaniphile. Lapha sishilo ezinye zezindlela ezisemthethweni ongathola ngazo iRobux mahhala, futhi ayidingi lutho ngaphandle komzamo ofanele.
1. Sebenzisa iRoblox Affiliate Program
Enye yezinto ezinhle kakhulu zikaRoblox ukuthi inikela ngohlelo olumangazayo lokusebenzisana kulabo abafuna ukuthola imali. Ungathola iRobux yamahhala ngakho konke ukubhaliswa okusha okwenzile usebenzisa uhlelo lokuhambisana. Uma umuntu obhekise kuye ethenga noma yiziphi izinto, khona-ke ngalezo zenzo nawe uzoklonyeliswa. Ukwabelana ngohlobo olulungile lwezinto ezingaphakathi kwegeyimu ngezinhlelo ezihambisanayo kuyindlela enhle yokuthola inani elikhulu leRobux.
Kuzofanele ukhethe into ekhethiwe esitolo seRoblox, futhi uzothola inketho yokwabelana lapho. Vele uchofoze kuyo bese uthola i-URL yokudlulisa, ezoqukatha ikhodi futhi. Manje yithuthukise ezinkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene ezinjenge-Facebook, Instagram, noma amafomu ngendlela esemthethweni. Uma ungalanda inani elifanele labadlali abasha kuRoblox, uzoklonyeliswa ngamathani wezinto ezinhle.
Kodwa-ke, qiniseka ukuthi awukopishi nokunamathisela i-URL kuphela ngoba ngeke ikhiqize noma yiluphi uhlobo lwemali engaphakathi kwegeyimu. Kuzofanele ubhalisele uhlelo lokuhambisana bese ukhetha isayithi ofuna ukuyinyusa.
2. Ukwakha Umdlalo Ukuze Uthole iRobux
Lapho usukulungele ukuthatha izinyathelo ezifanele, iRoblox iyinkundla okufanele isetshenziswe yibo bonke onjiniyela. Lapha akudingeki ukuthi ube yingcweti kwezobuchwepheshe ukuthuthukisa umdlalo oqinile ngoba inkundla yokudlala eku-inthanethi isivele inikezela ngamathani amathuluzi adingekayo ukukusiza.
Ukuzakhela owakho umdlalo kuseseyindlela engcono kakhulu futhi ezuzisa kakhulu yokuthola i-robux yamahhala. Imidlalo eminingi isingathwe kuDropbox yakhelwe ngamakhono ayisisekelo, futhi ungafunda futhi ngokubuka amavidiyo wokufundisa. Uma usudale umdlalo, vele ulinde ukuthi ufike ezingeni elilandelayo, futhi umuntu ngamunye abhalisele iRoblox, uzothola imali efanelekile.
3. Usebenzisa Izinhlelo Zokudlulisa Ukukhuthaza Umdlalo Wakho
Lapho usuthuthukise umdlalo wakho ngokuphelele, zama ukucabanga ngokusebenzisa uhlelo lobulungu olushiwo ngenhla ukukhuthaza umdlalo wakho. Lapha uzothola iRobux ngokubhalisela okusha ngakunye nokuthengwa kwezinto ezingaphakathi komdlalo. Kodwa-ke, kudinga ukuthi ufake umsebenzi onzima wangempela. Kodwa-ke, kuzofanele zonke izinyathelo ozithathayo.
Sare umdlalo wakho ngokusebenzisa amapulatifomu ahlukahlukene wezokuxhumana futhi wakhe fanbase eqinile yomdlalo wakho. Kuzokusiza ukuthola impendulo edingekayo lapho unganquma khona ukuthi yiziphi izingxenye zomdlalo ezidinga ukuthuthukiswa.
Ukwakha izindwangu nokuzithengisa Emakethe:
Uma ngabe uluhlobo luni lomuntu othanda imfashini futhi unengqondo yokudala, khona-ke lokhu kungaba ngcono kakhulu ukukuzuzela iRobux. URoblox unemakethe lapho ungakha khona izingubo usebenzisa amathuluzi enziwa ngezifiso futhi uwathengise ngentengo oyifunayo. AmaGamers athanda ukusebenzisa ama-avatar ahlukahlukene kubalingiswa bawo, futhi kunesidingo esikhulu sezikibha, amabhulukwe nezinye izingubo kuRoblox. Uma unenani elifanele lobuciko, lisebenzise ukudala izingubo ezifuna kakhulu futhi uthole imali enesizotha.
Ungafunda ukuthi ungazenzela kanjani izingubo ezahlukahlukene zama-avatar kuwebhusayithi esemthethweni bese ulandela ezinye izifundo.
Ukujoyina iRoblox Premium:
Noma sathi sizokwabelana ngomgwaqo onguthelawayeka ukuze sizuze iRobux, ukuthola i-premium yeRoblox kuseyindlela engcono yokuthola iRobux. Njengoba wazi, i-premium yeRoblox isuselwe ekubhaliseni, okusiza ukuthi ufinyelele emakethe lapho ungakha, uthengise, noma u-Robux ngamanani ashibhile. Ukuthola uhlelo lwe-Roblox premium kusiza ngezindlela eziningi ngoba lapha, uzothola isaphulelo seRobux senyanga esingu-10% kukho konke ukuthengwa kweRobux okwenze emakethe.
Ingabe i-Robux Generator iyasebenza?
Abasebenzisi abaningi be-shady amawebhusayithi abakhwabanisayo ngokubanika ukufinyelela kuma-generator wamahhala we-Robux. Ama-generator akwaRobux asebenze ezinsukwini ezedlule lapho omengameli benganikanga kangako ezintweni ezinjalo. Kepha, manje ipulatifomu inamazinga akhuphukile, futhi awusoze wakwazi ukusebenzisa amakhodi wokukhushulwa eyenziwe yilezi webhusayithi ezinomthunzi ukuthola iRobux mahhala.
Ngakho-ke lezi ngezinye zezindlela ezinhle kakhulu ongathola ngazo iRobux mahhala. Lapha akudingeki ukhokhele noma yini futhi ungakhiqiza amathani weRobux ngokushesha okukhulu. Abantu abaningi banokungabaza ngokwabelana ngamaphasi wamahhala, amakhodi ephromo, njll., Kepha akusasebenzi. Lezo bekuyizinsuku lapho uthola khona iRobux ngokusebenzisa amakhodi wokukhushulwa wamahhala. Kodwa-ke, uma ufuna ukuthola ngezindlela ezisemthethweni, izindlela ezibalulwe ngenhla zizokusiza. Uma ungabaza noma unemibuzo, bese ushiya amazwana ngezansi.